Saturday May 02, 2015 - 10:53:28 in Wararka by Super Admin
Howlgallada Dowladda Dabadilifka Tanzania oo ay baryahan dambe ku beegsaneysay Madaarista Quraanka lagu barto iyo Macalimintooda ayay Ururada Muslminta Wadanka kasoo horjesteen tallaabooyinkan ad-adag.
Ururada Musliminta Tanzania ayaa shalay war kasoo saaray Dagaalka cusub oo ay wado Dowlada kuna begsanayso Macalimiinta iyo Ardayda Madarista wax kabarata.
Sheikh Mussa Kundecha oo ah guddoomiyaha Ururada Islaamiga Tanzania oo ka kooban illaa iyo 11 urur oo Musliminta kunool Wadanka ay leeyihiin ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay inay qaati ka taaganyhihiin Howlagalda Boolisku ka wadaan Masaajidda iyo madaarista kuna qaqabanayaan Macaliminta iyo Ardaydooda iyagoo ku eedeynayataageera ay siiyaan waxa loogu yeero Argagixisada.
"Xukuumadda Waxaan siinaynaa 15 maalmood waa in taliyaha Booliska Dalkan uu kusoo daayo hogamiyayaasheena Muslimiinta oo lagu eedeyay kiisas aan raad lahayn oo ah been la doonayo in lagu joojiyo waxbarashada islaamiga ah,haddii dalabaadkeena loo hoggaansami waayo muslimiintu waxay dhigayaan dibad baxayo waaweyn oo saameyn ku yeelan doono dhammaan bulshooyinka Tanzania ku nool "ayuu yiri Sheikh Mussa Kundecha.
Sheikh Kundecha ayaa warkiisa caro laga dareemayay wuxuuna sheegay in Boolisku ay diideen Damaanad loo qaado hogamiyaasha Muslminta,aiyadoo la ogyaha buu yiri Badariyaasha Gaalda ah markii la qabto islamarkiiba in lasii daayo iyadoo la damiinanayo.
"Tani waa gardaro Dowladdu nagu heyso Sheikh Ponda Maanta wuxuu xiranyahay labo sano mana ahan Amarka Maxkamadda ee waxa waaye Amar kasoo baxayo ninka Gaalka ah ee Dacwada qaadayo DPP-ga oo ku andacoonayo in Sheekhu uu jeediyay hadallo Ammaanka wax udhimaayo,isla kiiskas oo kale ayaa lagu siidaaye Baadari Gaal Gwajima maxaa shekheena iyo kuwo kale loo heystaa" ayuu hadalkiisa sii raaciyay sheikh Mussa Kundecha.
Booliska Tanzania ee qaabilsan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada ayaa bishii lasoo dhaafay qaaday howlgallo lagu raafay tobaneeyo qof muslimiin ah kuwaasi oo aan wali wax maxkamad ah lasoo taagin.